Sawiro & muuqaalo – Page 7 – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
admin	 Feb 20, 2016 2
Waa Markale iyo Barnaamijyadii aynu kaga hadlaynay degmooyin iyo deegaano katirsan shabeelaha Hoose oo dib usoo galay Gacanta shabaabul Mujaahidiin. Qeybta Todobaad Ee Barnaamijka Dulmanayaashii Dib uxuroobay waxaa lagu soo qaatay…
Axmad	 Feb 17, 2016 0
Waa Markale iyo Barnaamijyadii aynu kaga hadlaynay degmooyin iyo deegaano katirsan shabeelaha Hoose oo dib usoo galay Gacanta shabaabul Mujaahidiin. Qeybta Afaraad Barnaamijka Dulmanayaashii Dib uxuroobay waxaa lagu soo qaatay deegaanka…
Waa Markale iyo Barnaamijyadii aynu kaga hadlaynay degmooyin iyo deegaano katirsan shabeelaha Hoose oo dib usoo galay Gacanta shabaabul Mujaahidiin. Caawa Barnaamijka Dulmanayaashii Dib uxuroobay waxaa lagu soo qaatay deegaanka Mubaarak …
admin	 Feb 16, 2016 1
Qeybta Labaad Barnaamijka Dulmanayaasha dib uxuroobay waxaa xalay lagu soo qaatay degmada Owdheegle ee gobalka shabeelaha Hoose. Degmadaasi waxay kamid tahay degmooyinka ay dib kaga gurteen ciidamada Shisheeye iyo kuwa Dowladda.…
Idaacadda islaamiga ah ALfurqaan waxaa caawa ka baxay barnaamijyo taxana ah oo loogu magac daray Dulmanayaashii Dib uxuroobay. Wariyaheena Cabdullaahi Soomaali oo socdaal shaqo ku maray Gobalka shabeelaha Hoose ayaa booqday degmooyin iyo…